saif ali khan | Ratopati
जन्मदिन मनाउन परिवारसहित माल्दिभ्स पुगे सैफ access_timeसाउन ३२, २०७८
अभिनेता सैफअली खानको आज जन्मदिन परेको छ । उनी आज ५१औं जन्मदिन सेलिब्रेसन गर्दैछन् । जन्मदिन मनाउन उनी पत्नी करिनासहित सपरिवार माल्दिभ्स पुगेका छन् । अभिनेत्री करिनाले दुई नयाँ तस्बिर शेयर गर्दै सैफलाई जन्मदिनको शुभकामना दिएकी छन् । इन्स्टाग्राम मार्फत सार्वजनिक गरिएको ...
तैमुर जन्मँदा करिनाले अस्विकार गरेको नाम अब कान्छो छोराका लागि राख्लिन् ? access_timeफागुन १०, २०७७
बलिउडका स्टार कपल करिना कपुर खान र सैफ अली खान दोस्रो पटक आमाबुवा बनेका छन् । आइतबार करिनाले छोरालाई जन्म दिएकी छिन् । त्यतिबेला देखि नै पटौदी परिवार चर्चामा छ । करिना कपुरले आफ्नो दोस्रो छोराको नाम के राख्नेछिन् यसबारे निकै चर्चा छ । सोसल मिडियामा प्रशंसकले थुप्...
सैफ अली खानले लिए पितृत्व बिदाः भने, ‘आफ्नो बच्चा हुर्किरहेको देख्न नपाउनु सबैभन्दा ठूलो गल्ती’ access_timeमाघ २६, २०७७
सैफ अली खान चौथो पटक पिता बन्ने तयारीमा छन् । करिनाले यसै महिना दोस्रो सन्तानलाई जन्म दिँदैछिन् । यस्तोमा सेफले पितृत्व बिदा लिने तयारी गरेका छन् । सैफले यो बिदाको विषयमा कुरा गर्दै भनेका छन्, ‘तपाईंको घरमा नयाँ पाहुना आएको बेला कसलाई काम गर्न मनलाग्छ ? यदि त...
‘तान्डव’ माथि बबाल, सैफ करिनाको घरमा प्रहरी तैनाथ access_timeमाघ ५, २०७७
सैफ अली खान स्टारर वेब सिरिज तान्डवको विषयमा बबाल मच्चिएको छ । बिजेपी सांसद राम कदमले सैफ अली खानमाथि निशाना साँध्दै आफू एकपटक हिन्दू भावनालाई चोट पुर्याइएको उक्त वेब सिरिजको हिस्सा बन्न चाहेको बताएका छन् । यो विवादलाई मद्देनजर गर्दै सैफ र करिना कपुरको घरमा प्रहरीक...
विवाद चर्किएपछि सैफ अली खानले रावणबारे दिएको बयानका लागि मागे माफी access_timeमंसिर २२, २०७७
फिल्म अभिनेता सैफ अली खानले पौराणिक चरित्र रावणमाथि गरिएको आफ्नो टिप्पणीका लागी माफी मागेका छन् । उनले कसैको पनि भावनालाई ठेस पुर्याउने उद्देश्य नरहेको बताएका छन् । यो विवाद बलिउड अभिनेता सैफ अली खानको टिप्पणीपछि सुरु भएको थियो । उनी आफ्नो आगामी फिल्म ‘आद...
सैफ अली खानले बढाए तीन गुणा पारिश्रमिक, आउँदैछ यो ठूलो प्रोजेक्ट access_timeकात्तिक २६, २०७७
बलिउडका नवाब भनिन् सैफ अली खान आजकाल निकै व्यस्त छन् । ठूला पर्दामा निकै कम फिल्म चलिरहेका छन् तर ओटीटीले सैफको करियरलाई भने नयाँ दिशा दिइरहेको छ । सेक्रेड गेम्स उनको करियरमा गेम चेन्जर साबित भएको छ । ओटीटीमा आफ्नो सफलता देखेपछि सैफ अली खानले आफ्नो पारिश्रमिकमा ...
सैफ अली खानको आत्मवृत्तान्त आउँदै access_timeभदौ १०, २०७७
फिल्म उद्योगमा दुई दशकभन्दा बढी समय बिताएपछि सैफ अली खान अर्को वर्ष आफ्नो आत्मवृत्तान्तलाई दर्शकमाझ पस्कनेछन् । यसका लागि उनले हार्पर कलिन्ससँग सम्झौता गरेका छन् । उक्त आत्मवृत्तान्तमा उनको फिल्म र नीजि जीवनबारे जानकारी हुने बताइएको छ । सैफले पहिलो पटक आफ्नो नीजि जीवनबारे ख...
करिना कपुर दोस्रो पटक आमा बन्दै access_timeसाउन २९, २०७७
बलिउड नायक सैफ अली खान र नायिका करिना कपुर खानको परिवारमा चाँडै नै एक सदस्यको आगमन हुँदैछ । यस्तो खबर सोसल मिडिया अलि अगाडिदेखि नै चलिरहेको थियो तर अब उनको परिवार आफैंले यसबारे घोषणा गरेको छ । खान परिवारले बुधबार एक वक्तव्य जारी गर्दै भनेको छ, ‘हाम...
सैफ अली खानले भने, ‘म पनि परिवारवादको शिकार भएँ तर कसैले कुरा गर्दैन’ access_timeअसार १८, २०७७
सुशान्त सिंह राजपूतको निधनपछि हिन्दी सिनेमा उद्योगमा लगातार नातावाद र गुटबन्दीको बहस तीब्र भएको छ । सोसल मिडियादेखि अन्तरवार्तासम्म अब सेलिब्रिटीले यसबारे खुल्ला रुपमा आफ्नो कुरा राख्न थालेका छन् । सैफ अली खानले हालै नातावादबारे मुख खालेका छन् । उनले आफू ...
जब करिनाले गरिन् खुलासाः सबैले भनेका थिए सैफसँग विवाह गरे पछुताउनेछौ किनभने उनी... access_timeजेठ ३०, २०७७
सैफ अली खान र करिना कपुर खान बलिउडका निकै चर्चित जोडीमध्येका एक हुन् । यो जोडी अक्सर लाइमलाइटमा आइरहन्छन् । सैफ र करिनाले सन् २०१२ मा विवाह गरेका थिए र यी दुईको विवाह निकै चर्चामा रह्यो । यतिमात्रै होइन, जब करिनाले छोरा तैमुरलाई जन्म दिइन् तब तैमुर पनि अत्यधिक चर्चा...
भित्र यति शानदार देखिन्छ सैफ–करिनाको पटौदी महल access_timeजेठ २९, २०७७
सैफ अली खान बलिउडका एकमात्र यस्ता नायक हुन् जसको महल छ । उनको महलको नाम पटौदी प्यालेस हो जसलाई अब सैफ अली खानको नाममा राखिएको छ । तर यो पाउनु सैफ अली खानका लागि सहज भने थिएन । सैफले एक अन्तरवार्तामा उनको पिता मंसुर अली खान पटौदीको निधनपछि पटौदी प्यालेस ऋणमा ड...
तानाजीमा जे देखाइएको छ त्यो खतरनाकः सैफ अली खान access_timeमाघ ६, २०७६
बलिउडका चर्चित अभिनेता सैफ अली खानले ‘तानाजीः द अनसङ्ग वारियर’ जस्तो फिल्ममा ऐतिहासिक तथ्यलाई जुन तोडमोड गरिएको छ, त्यसलाई खतरनाक बताएका छन् । फिल्म क्याम्पेनियनका लागि पत्रकार अनुपमा चोपडालाई दिएको अन्तर्वार्तामा सैफले आफूलाई उदयभान राठौरको भूमिका नि...